मोदी-मुखर्जी आउँदा विदा दिन मिल्ने, राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्न नमिल्ने ? - Asian Samachar
मोदी-मुखर्जी आउँदा विदा दिन मिल्ने, राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्न नमिल्ने ?
Asian Samachar बुधबार, पुस २७, २०७३ (11 months ago) बिचार/ब्लग
कसैको बाउको बिर्ता हैन यो देश । कसैको जन्मदिनमा काट्ने केकको टुक्रा हैन यो देश । हाम्रा पुर्खाहरुले पानी सम्म नखाई अन्तिम श्वास रहँदा सम्म शत्रु संग लडेर जोगाएको देश हो यो । जसको नेतृत्व राष्ट्र नायक श्री ५ बडामहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए ।
‘मेरा साना दु:खले आर्ज्याको मुलुक हैन’ । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड हो यो भनाई । यो भनाईले सबै बोलेको छ । कति दु:खले, कति मेहनतले अंग्रेजको पञ्जाबाट जोगाएर राखेको देश हो यो । संसारभरीका हरेक देशले अरुको गुलामी सहेर मुक्त भएको दिनलाई स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन, तर हामी छाती फुलाएर संसारको कुनै शक्ति संग नझुक्ने वीर गोर्खाली हौँ भनेर भन्ने हैसियत कस्ले बनाईदियो हेक्का रहोस ।
गोजिमा श्री नेपाल सरकार लेखेको नागरिकता बोक्छौ, विदेश जाँदा वीर गोर्खालीको देश भनेर खोक्छौ, तर राष्ट्र निर्माताको शालिक ढाल्छौ, ईण्डियन कुत्ता पाल्छौ, अनि बेलायती दक्षिणा लिएर कृश्चियन बनेर सिंहदरबार बाट भुक्छौ । ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको दास ईण्डियन राष्ट्रपती आउँदा सार्वजनिक विदा दिन्छौ, मोदी आउँदा कर्फ्यु लगाउँछौ । राष्ट्र टुक्राउँछु भन्ने सुँगुरहरुलाइ ज्वाइँ झै पाल्छौ । देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको फोटो मन्त्रालय बाट फाल्छौ । अनि लेनिन, माओ र गान्धीहरुको फोटो भित्तामा टाँस्छौ । के गरेको छ लेनिनले नेपालको लागि ? के गरेको छ माओले हाम्रो लागि ? तिनले कर्णालीमा पुल बनाईदिए ? पुर्व पश्चिम राजमार्ग बनाईदिए ? कि तिनले हामीलाई वीर गोर्खाली बनाईदिए ? तिम्रो नक्कली राष्ट्रवाद छर्लङग भैसकेको छ ।
उल्टो हामीलाई देश द्रोही ठान्छौ गद्दारहरु, देश बनाउनेको सम्झनामा एक दिन एकता दिवस मनाउँदा तिमिहरुको के बिग्रन्छ ? हुन त भालुलाई पुराण सुनाएर के काम ? देश टुक्राउने नै मुख्य उदेश्य भएकाहरुलाई, देश टुक्राएर लेण्डुपको सिको गर्दै छोटे राजा बन्ने सोच भएकाहरुलाई, सिङो नेपाल बनाउने मान्छे शत्रु लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।
याद राख ! गान्धीलाई राष्ट्रपिता मान्ने नेहरुका छाउराहरु हो । तिमिहरु नाचिरहेको मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले संसार कब्जामा लिने शक्तिशाली शक्ति अँग्रेजहरुलाई समेत घुँडा टेकाएर टिकाएर राखेको देश हो । जहाँ तिमिहरु अहिले राज गरिरहेका छौ त्यो पहिले पचासौँ टुक्रामा विभाजित थियो ।
नेपालाई एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो र विशाल राष्ट्र बनाउने पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी तिमिहरुले अवमुल्यन गर्दैछौ । भोलि तिमिहरुलाई पनि आउने सन्ततीले त्यस्तै गर्ने छ्न् ।
आज पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा त हामी लाखौँ मान्छे छौँ तर तिमिहरु मर्दा त दुनिया खुसी हुने छ । तिमिहरुको लाशमा फुल हैन जनताले ढुङ्गा बर्साउनेछन । ईतिहास नविर्स, आफ्नो पहिचान नविर्स । हाम्रा पुस्ताको ईतिहास तिमिहरु विर्सिन्छौ भने तिमीहरुको ईतिहास नी भोलि आउने पुष्ताले विर्सिने छ । जय देश !!!
वाम गठवन्धन कस्को कस्तो चाहाना हो ? वरिष्ठ पत्रकारहरुको विश्लेषण
उत्तरकोरियाको समाजवाद वुझ्न कोशेढुंगा वन्ने एक समृद्ध यात्रा डायरी (तस्विर सहित)
पेरु कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष अभिमायल गुजमान रेनेशो गोञ्जालोको ऐतिहासिक भाषण
किरण र विप्लव वीच पार्टी एकता असंभव (हेर्नुस विप्लवमाथि किरणका आरोपहरु)
‘संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबीच टकराव’- स्वर्णिम शाही